Hello Nepal News » नेपाली मूलकी चेली इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा !
नेपाली मूलकी चेली इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा !
नेपाली मूलकी चेली अस्मित आलेमगर इंग्ल्यान्डको यु–१९ टोलीमा परेकी छन् । इंग्ल्यान्डले अस्मितालाई युइएफए वुमन्स यु–१९ च्याम्पियनसिपको छनौटको पहिलो चरणको खेल खेल्न टोलीमा समेटेको हो । अस्मिता क्लब फुटबलमा एस्टन भिल्लामा डिफेन्डर पोजिसनबाट खेल्दै आएकी थिइन् । अब अस्मिताले अब इंग्ल्यान्डको युवा समूहबाट साईप्रस, बेलारुस र सर्बियासँग खेल्ने पक्का भएको छ ।
क्लब एस्टन भिल्लाले यो पुष्टि गरेको छ कि, अस्मिता इंग्ल्यान्डको यु–१९ टोलीमा परेकी छन् । अस्मिता बेलायती पूर्वसेना अमृत आलेकी छोरी हुन् । १७ वर्षीया उनले यसअघि इंग्ल्यान्डको यु–१६ टोलीबाट खेलिसकेकी छन् । यसपटक उनलाई यु–१९ मा पनि राखिएको हो ।
अस्मितका बुबा अमृत क्विन्स गोरखा सिंगलकाका सैनिक हुन् । उनीहरूको परिवार इंग्ल्यान्डमै बस्दै आएको छ । हाल जारी प्रतियोगितामा इंग्ल्यान्डले यसअघि साईप्रसलाई ८–० ले हराइसकेको छ । यस प्रीतयोगितामा पहिलो चरणको छनौटमा युरोपका ४८ राष्ट्रको सहभागिता छ । ती देशलाई विभिन्न १२ समूहमा राखिएको छ ।
सो प्रतियोगितामा इंग्ल्यान्ड समूह ‘के’ मा परेको छ । सो समूहबाट शीर्ष दुईमा रहने टिम सन् २०२० मा आयोजना हुने युइएफए वुमन्स यु–२० प्रतियोगिताका लागि छनौट हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति १६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०६:४८